Ma iga caawin kartaa inaan fahmo faa'iidooyinka muhiimka ah ee bogagga internetka ee PR ee dhabarka?
Dabcan, haddii aad rabto inaad ku raaxaysatid horumar dhab ah oo la qiyaasi karo ee SEO ah, waa lagama maarmaan in la dhiso profiles xiriir tayo ah ee boggaaga ama bloggaaga. Maalmahan, waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah oo ka dhigaya "habboon" muuqaalka dhabarka - waxay u dhigantaa, kala-jaadnimada, iyo tayada. Sida muuqata, isku xirnaanta tayada oo dhan ayaa la dhisay habka dabiiciga ah oo ka imanaya ilaha kaliya ee lagu kalsoon yahay oo leh PageRank sare, maamulka domain, maamulka bogga iwm. Laakiin miyaa macnaheedu tahay in lagaa rabo inaad soo qaadato bogagga internetka sare ee PR ee dhabarka?
Waxaan rumaysanahay in maya, maya. Waa maxay sababta? Sababtoo ah waxyaabaha dhabta ah waa wax aad u adag. Waxaan loola jeedaa in aad leedahay sida websaydhyo badan oo PR ah oo loogu talagalay backlinks sida ugu macquulsan marnaba ha kuu ogolaato meel kasta. Dhab ahaan, waxaan si fudud u heli karnaa PR9 cusub ama laga yaabee xitaa PR10 backlink, tusaale ahaan WordPress. Wax waliba waa la dhammeeyaa oo keliya daqiiqado - waana la dhammeeyaa. Sidaa darteed, gadaashani waxay noqon laheyd wax faa'iido leh, sideed u aragtaa? Xaqiiqdii, waxba ma ansixinayaan gadaal cusub. Waxaan loola jeedaa in gadaal kasta oo gaar ah uu noqon doono mid aan waxba tarayn oo aan waxba ka jirin haddii aysan noqon doonin qayb ka mid ah qaybaha dabiiciga ah ee noocyo kala duwan oo kala duwan. Taasi waa sababta aan kugula talineyno in la kala badiyo si loo dhiso xiriiro leh meelo kala duwan oo kala duwan, taas oo ay tahay in ay leeyihiin kala duwanaansho kala duwan, dabcan waxaa ka mid ah dhibcaha PageRank la'aanta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waa mid aad muhiim u ah in la helo tiro ku filan oo ah websaydh heer sare ah ee PR ee dib u celinta. Waxyaabahaasi waa in makiinadaha raadinta waaweyn ee Google sida laftoodu ay isticmaalaan saddex arrimood oo muhiim ah (i. e. , ku-xirnaansho, kala duwanaanta, iyo tayada - qayb ahaan lagu qaybiyo hantida PR) si loo go'aamiyo miisaanka dhabta ah iyo saxsanaanta dhabarka kasta ee boggaaga boggaaga. Tixgeli faa'iidooyinka muhiimka ee soo socda ee isticmaalka bogagga internetka ee PR ee dhabarka. Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato kaliya haddii aad haysato wax tayo sare leh oo si macquul ah wax looga qabto.
Faa'iidooyinka Guud ee Dareeraha Dheeriga ah:
Gaar ahaan sawirrada muuqaalka boggaaga ama blogka, aragtida makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google isaga iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing.
Gaadiidka suurtagalka ah ee aadka u muhiimka ah ayaa lagu soo rogay boggaga internetka, dabcan waxaa la bixiyaa in tayadaada sareysa ee aad tayada u leedahay ay tahay mid ku filan oo soo jiidata qaar ka mid ah dadka isticmaala rasmiga ah iyagoo ugu dambeyn bixiya booqasho website-kaaga ama blog.
Awoodda iyo kalsoonida kale ee ilaha xogta ee ku xiran ilaha webka ee leh PageRank sare waxaa lagu aqoonsan doonaa Google oo ah calaamad wanaagsan oo wanaagsan, sidaas darteed samaynta boggaga internetka ama blogkaaga oo lagu qiimeeyo booska sare ee sare SERPs.
Meelka sare ee raadinta raadinta laftiisu waxay suurtogal u tahay in ay soo jiidato gaadiidka internetka oo kordhay, taas oo muujinaysa iftiinka cagaaran ee si ballaaran u raadinta internetka, isla mar ahaantaasna u rogaya macaamiishaada mustaqbalka dhabta ah, ugu dambeyntiina iibinta weyn ee miisaanka.
Abuuritaanka wacyi galin dadweyne oo wanaagsan, badanaa sii wanaajinta joogitaankaaga internetka iyo ka qayb qaadashada magaca caanka ah ee ganacsigaaga Source .